Taariikhda My Butros » Ma jiraan wax A Sida A Fight Good In Xiriirka noocaas ah?
Last updated: Aug. 06 2020 | 4 min akhri
Inkastoo doodaha waxaa loo arkaa wanaagsan ee xiriirka, waa jiraan sida wax dagaalka wanaagsan in xiriir? Haa waxaa jira, rumaysan. Dagaal ka caawisaa xiriir si uu u koro sida laba qof ay is fiican u yaqaanaan. Tan waa wax aan la baajin karin, lamaane u baahan tahay in ay bartaan sida ay u dagaalamaan si cadaalad ah.
Ogaashada sida loo si ay ula dagaalamaan caddaalad ah wax badan ka muhiimsan ogeyn sababta dagaalka uu ka qarxay meesha ugu horeysa, inkastoo isagoo dagaallan yar yar ma u qalantaa. Qaadashada waqti marka hal rafiiq ayaa dareensan sida ay ku saabsan in waa lumin waa waa mid aad u muhiim ah, tan iyo markii aan sidaas samaynaya u horseedi kara inay falcelin dheeraad ah oo halis ah taas oo laga fogaan karay.
Waxaa intaa dheer, waxaa muhiim ah in la sameeyo qofka kale dareemayaan, in lagu maqlay. Ha leeyihiin kulan ku dhawaaqayeen, sida ay marnaba caawin xaliyo wax, isku-dayidda in had iyo jeer laga yaabaa in.
Marka dagaal uu la wadaagto ee, had iyo jeer raadsato si loo xaliyo dagaalka ka helo khilafyada, halkii ay ka dagaalamaan inuu ku guuleysto. Si kastaba ha ahaatee, maadaama tani ay tahay fudud ayaa sheegay in ka badan soo gabagabeeyay, waxaa jira laba ka mid ah xeerarka, kaas oo, haddii raacay, dhab ka dhigi kara dagaal in u qalantaa.
QABASHADA dib cadho ah uma shaqeyn doonaan; halkii dhigay xanaaqaaga guud ahaan adiga iyo saygaada
Cadho waa dareen universal, oo tusaya xanuun, walbahaarsan, gabax iyo xitaa qoomamo. Waxaa sabab u noqon kara dhacdo in wakhti yar ka hor ama dhacdo hadda. Si kastaba ha ahaatee, dadka badankiisu ma oga sida loo Cadho ka qaban.
Cadho waa in loo arkaa dajinta sida, dareen ah taas oo ka caawisa kan ay nolosha wadaagaan in ay la yimaadaan xal u dhibaato. Sidaa darteed, bixinta si cadho fiiro yar oo dheeraad ah si fudud ayaa kaa caawin doona heshiis la Jidka dood iyo sidoo kale in ay xal.
Siinta dharbaaxo low ma dhigi doonaa geesi hal
Xujooyin ma Xaqiidii inay soo qaadaan liito lammaanahaaga, siraha ama xataa la soo dhaafay ka jabsada. Tani waa dhabarjab ku yar yahay oo muujinaysa in mid ka mid waa mid aad ammaan ahayn in ay maqaarka u gaar ah, Sidaa darteed, ayaa dareensan baahida loo qabo in ay weeraraan lammaanahooda si ay u sameeyaan naftooda dareento in aad fiican, ama waa fuley ah uu leeyahay oo sugayn muran si loo soo afjaro xiriir.
Noocan oo kale ah falalka fulaynimada ah sameeyo si ula kac ah ay u keenaan xanuun xataa ka badan si uu qofka kale waa in laga fogaadaa ha'ahaatee. Halkii qof garaacid hoos ku suunka, rafiiq waa in si degan hawada u furto ka waxa dhaawici isaga ama iyada. Haddaba waxanu waa wixii ka dhigaysa qof geesi.
Ha illoobin si ay u muujiyaan walaac, jaceylka, mahadnaqa, oo ka tacsiyadeysay Geeridii
Qof kasta oo isagoo dagaal kula lamaanan oo aan ku muujiyey mid ka mid ah ee kor ku xusan waxaa xaq waxba qaban. Kuwani waa shucuur aad u muhiim ah, gaar ahaan dadka ku nool xiriirka, sida oo kale muujiyaan dareenkooda, kuwaas oo caawin doona in la hubiyo in lamaane had iyo jeer dagaallan wanaagsan.
Jaceylka ku lug ma keeni karo xanuun in kan ay nolosha wadaagaan, sababtoo ah waxay ogtahay in lammaanaha uu xaq u leeyahay in la daaweeyo si cadaalad ah. Si la haya qof, mid uu leeyahay in ay eegaan xaaladda ka eegaya dhinaca qofka kale.
Ha qayliyaan, qaylin, iyo cay
Qof abid naftiisa ama nafteeda helay xaalad halkaas oo ay ku caawin karin balse dhan waxyaabo badan oo khalad odhan markay cadhooday, weli waxay ogyihiin inay qalad tahay, laakiin aad bay uga cadhooday inay u malaynayaa in ay yihiin? Dagaal sameeyo in cid, gaar ahaan marka la dagaalanka cadaalad daro.
Waa muhiim in aad qaadato waqti aad inta aad jawaab uga xanaajiyeen. Ha ku degdegin inaad la hadasho sida erayada la blurted lahaa in aan marnaba la celin karo, iyadoo aan loo eegayn waxa. Qaylinta iyo qaylo sambabada mid out iyo lammaanahaaga mid aflagaado ah ee keliya ee lagaga xayuubiyay ayaa qofku codkiisa, tooso carruurta iyo malaha inta kale ee xaafada.
Ha la diririna Ujeeddada ah in ay ku guuleysato ama inuu noqdo mid ka mid ah oo ku saabsan xaq u
Marka la mid xaaska dagaalamaya, ha isku dayin inaad si adag u noqon guuleystay, wadaajinna samaynaya tani waxay noqon kartaa oo kaliya mid ku saabsan khalad ah. Isku dayga si adag tahay in la soo saaro xaq kaliya tagaa si ay u muujiyaan dareenkooda of inadequacy kuwa, nooca dadka marna rabin in ay khalad.
Waa maxay isticmaalka guuleystay dagaalka ka, laakiin waxaa laga badiyay hal xaaska? Ma u qalantaa? Mid ka mid ah waa in aan si ku mashquulsan on guuleystay dagaalka ka in ay ku fashilmaan in la arko sida badan ay nolosha la wadaagto uu saameeyey. Waxay qaadataa badan oo dadaal inaad ka noqoto wax yar iyo qiimeeyaan xaaladda, in la arko sida mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in qayb qaatay khilaafka.
Ha isku dayin inaad siiso dhaleeceyn wax dhisaya, ma shaqayn doono!
Marka la dagaalanka, ma dhaleeceeyo qofka kale, fikirka, waxaa iyaga ka caawinaya sababta oo ah ma aha. Qof kasta oo ku hawlan la dagaalanka ah sida caadiga ah waa mid aad u cadhooday, iyo dhaleecayn kasta la siiyaa marka ay marayso waxaa loogu tala galay, xanuujin. Waxa kaliya ee tan ku guuleysto waa in ay sameeyaan mid ka mid xaaska dareemayaa waxay sameeyeen wax u dambidhaaf iyo oos.
Halkii, waxaa lagu talinayaa inaad ka cabato in qofka kale iyagoo u sheegaya waxa mid jeclaan lahaa inaan arko mustaqbalka.
Ka dib dhan ayaa la sheegay oo lagu sameeyey, mid wax siddo run. Waxaa wax sida cadaalad dagaal waa, taas oo ah mid aad muhiim u ah dadka ku nool xiriirka. Mid ka mid ah in uu wax laga barto khaladaadkii ay ku fahmi kaliya ma ahan wixii ay sameeyeen oo laga yaabo inuu ku soo bilowdo dagaalka ka, laakiin sidoo kale waxa ay qaban karaan si ay u fiican mustaqbalka. Qof kasta waa kan kara inuu xariif xirfado fiican oo xaq ah dagaal waa hubi inaad ku raaxaysato xiriir aad u dheer oo ku faraxsan.